रेडियो ताप्लेजुङ ‘वाइडबडी जहाजमा घुस खाएको भए यसरी दुनियाँलाई चुनौती दिँदै हिँड्ने थिएँ र ?’
मंसिर २० गते । नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी अर्थात ठूला जहाज किनेपछि त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिमा छलफल भैरहेको छ । २४ अर्ब रुपैयाँमा किनिएका जहाजमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको हुन सक्ने लेखा समितिले जनाएको छ ।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि जहाज किन्दा अनियमितता भएको आशंकामा अध्ययन गरिरहेको छ । तर निगमले भने संस्था डुब्नै लागेको अवस्थाबाट उकास्नको लागि प्रयास भएकाले केही व्यक्तिलाई चित्त नबुझेको र निगम डुबाउनको लागि विवाद झिकिएको दावी गर्दै आएको छ । यही विषयमा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसँग अर्जुन पोख्रेलले गरेको कुराकानी:
त्यसमा पनि ६ अर्ब तलमाथि भयो रे । भनेको १८ अर्बमा २ वटा वाइडबडी कस्ले दिने रहेछ रु त्यसैले यो शतप्रतिशत झुट, वाइयात कुरा हो । कसैले कल्पना गरेर नेपाल वायुसेवा निगमलाई होच्याएर अरु कसैलाई फाइदा हुने किसिमबाट गरेको होला यस्तो हल्ला । मलाई त यस्तो केटाकेटी कुरा देखेर अचम्म लागिरहेको छ ।
लेखा समितिले तपाईँहरुलाई २१ वटा बुँदामा शंका गरेको छरप्रश्न जिज्ञासा पनि छन् । त्यसमा तपाईंहरुलाई आएको कमिसनको पनि कुरा उठेको छ । यसपटक कमिसन नै आएन कि आएको कमिसन खल्तीमा हालिसक्नुभयो ?
९लामो हाँसो० जहाज किन्दा अहिले कमिसन आउँदैन भन्ने संसारले नै थाहा पाइसक्यो । अमेरिकामा त पहिलेदेखि नै कमिसन दिने चलन हटेको थियो, युरोपमा पनि ८र१० वर्ष नै भैसक्यो टेन्डर हाल्दा, यताउति गर्दा एक पैसा पनि कमिसन दिन छाडेको । हामीलाई कमिसन दिएको भनाई नै वाइयात हो । हामीलाई कमिसन दिएको भए उनीहरुले गोप्य राख्नै सक्दैनन् । अहिले इन्टरनेटको जमाना छ, सबै कुरा राखेकै हुन्छ, हेरे भैहाल्यो त ।
वैधानिक कमिसन भन्या त हामीलाई दिएको छुट नै भैहाल्यो नि । अरु अवैधानिक कमिसन कसरी आउँछ बाबा । मलाई कसैले देखाइदिनुस, यो २ सय १० वटा देशमा कुन चाहिँ देशले यही मोडलको र यही इन्जिन भएको जहाज हामीले भन्दा सस्तोमा किन्न सक्छ रु मलाई देखाइदिन खुला चुनौती दिन्छु ।
मैले घुस खाएको भए, गल्ती गरेको भए, कमिसन आएको भए ‘कन्फिडेन्स’ आउँदैन थियो होला । देशको लागि गरेको काम हो, कुनै तलमाथि भएको छैन । हामी ढुक्क छौँ त्यसैले कोहीसँग किन डराउने रु गल्ती गरेको भए यसरी दुनियाँलाई चुनौती दिँदै हिँड्ने थिएँ र ?
३ वर्षपछि पनि यो कुरा आएको थियो । त्यतिखेर हामीसँग ३२ र ३३ वर्ष पुराना २ वटा बोइङ र भर्खरै किनेका २ वटा न्यारोबडी एयरबसका जहाज थिए । त्योबेला नै हामीले एयरबस नलिने भनेर निर्णय गर्न सक्थ्यौँ, तर त्यसो भनेको भए हामीलाई के भन्थे होला रु त्यसैले हामीले बोइङ बेचेर एयरबस लिने निर्णय गरेका हौं । हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै टेन्डर आह्वान गर्दा एयरबसका विमान नै सस्तो पाउँछौ त बोइङ खोज्न कहाँ जाने ?
त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्याण्ड गर्ने ३० वटा विदेशी कम्पनीमध्ये ६० प्रतिशत जहाज त एयरबसकै छन् त । हामीले ३०र३२ वर्ष बोइङ चलायौँ । फेरि पनि चलाउँथ्यौँ होला, तर एयरबसमा जानुमा हामी होइन, हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले काम गरेको हो ।
९लामो हाँसो० अब मेरो नाममा भएको जग्गा साँच्चै सुगतरत्न कंसाकारको हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्यो भने के हुन्छ रु खास लालपुर्जा हेर्नु छैन इन्टरनेटमा भएका पुराना कुरा हेरेर कुरा गर्नेहरुलाई के भन्न सकिन्छ र । इन्टरनेटको मिति पनि हेर्न नजाने जसरी पुरानो मितिको कुनै फाइललाई एउटा मिडियाले लेखिदियो अनि अरु त्यसैको पछि लागेका छन् । यदि साँच्चै लालपुर्जा हामीसँग नभएको भए त खतरा नै हुन्थ्यो नि ।
म नै फ्रान्स जानुपरेको एउटा कारण त्यो पनि हो । हाई फ्लाइ एक्सको प्रमुख र मेरो हस्ताक्षर छ । ल अफ् इंग्ल्याण्ड भएको देशमा भएको कम्पनीले त्यत्रो फट्याइँ गर्ने आँट कसरी गर्न सक्छ र रु नेपालको लालपुर्जा जस्तै उनीहरुको ‘विल अफ सेल’ भएको हुनाले नै हामीलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जहाज चलाउने अनुमति दिएको हो नि ।
वाइडबडी किन्नुअघि बनाइएको व्यापारिक योजनामै हामीले कोरिया, जापान र साउदी अरबमा जहाज उडाउने योजना बनाएका थियौं । यी तीन देशमा हप्तामा तीन, चार वटा फ्लाइट राखेर वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ नयाँ जहाजबाट कमाइ गर्ने योजना थियो । तर भवितब्य भनौँ कि के भनौैं, हामीले जहाज किन्नु पनि ईयूले झन टाइट गर्दै जानु एउटै समय पर्‍यो ।
जापान र कोरियाले दिन्न नै त भनेका छैनन् । तर केही गरी उनीहरुले ढिलाइ गरेको खण्डमा पनि आकाशै खस्ने त होइन । अहिले ड्रागन एयरले हङकङबाट काठमाडौंसम्म हाम्रा भन्दा ठूला वाइडबडी उडाएकै छ त । अनि हामीले चाहिँ उडान सक्दैनौं त रु उसले त्यतिकै ल्याएको त होइन होला । तर हामीले वाइडबडी हङकङ चलाउँदा किन गिज्याइरहेका छन कुन्नि ।
३०र३२ वर्षसम्म एक सय ९० सिटको जहाज दिल्ली उडायौँ हामीले । अहिले २ सय ७४ सिटको उडाउँदा के चाहिँ बिग्रन्छ र भन्या । यात्रु भए भने हाम्रो वाइडबडी जहाँ पनि चल्छ ।
हामीलाई १८ जना पाइलट चाहिन्छन् । अहिले बल्लतल्ल ११ जना पुगेका छन् । यदि जापान र कोरिया उडान भएको भए पनि पाइलटकै कारण रोकिने अवस्था आउँथ्यो होला । अब हामी १८ जना पाइलट पुर्याउने क्रममा छौं । अब फुल स्पीडमा चल्छन् हाम्रा जहाज । उज्यालो